High Performance Mudhudhudhu Spark plugs Nickel Alloy Electrode Fit Mazda / Peugeot, China Yakakwira Performance Midhudhudhu Spark plugs Nickel Alloy Electrode Fit Mazda / Peugeot Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - TAKUMI AUTO CHIKAMU
Yakakwira Performance mudhudhudhu Spark plugs Nickel Alloy Electrode Fit Mazda / Peugeot
Nickel kuifukidza mudhudhudhu Spark plugs, 0.8mm Gap Dzomoto plugs For Honda Midhudhudhu
Nickel Alloy Electrode Motorcycle Spark plugs yeBosch Y5DDC / Denso VXU22 stk 6046
(2756) BKR6E-11 Auto Spark Plug BKR6E-11 yeToyotas Corolla
Ground Electrode Tip Chinyorwa: Nickel
Center Electrode Core Chinyorwa: Mhangura
Insulator Chinyorwa: Ceramic
Center Electrode Tip Chinyorwa: Nickel
Rudzi rweFitment: Kutsiva Kwakananga
TAKUMI DK7RTC kutsiva spark plugs
· Shasha RAX94C
· Shasha RAX94YC
· Kupatsanura SF415C
Tsvaga: 19mm Material: Nickel chiwanikwa Electrode
OEM: ZKR7A / Denso XU22EPR-U / IXU22 Application: Mazda / Peugeot / KIA / BWM
Electrode Enovandudza Nickel chiwanikwa electrode
Maitiro Ekuverenga Wako Spark plug
Injini yako iri kumhanya yakatetepa here? Kupfuma zvakanyanya? Iko kune nyaya here nekutonga kwemafuta kana kuvesa nguva? Kana zvese zvese zvakangonaka neinjini yako? Kufanana neyemuchina vhezheni yeMagineti 8-Bhora, ako maparaki plugs anogona kunge aine mhinduro dzako. Icho chinonyengera chiri kudzidza kuverenga yako spark plugs.
Nerubatsiro kubva kune nyanzvi dzekutsvaira paBeyond First Auto, isu tinokudzidzisa maitiro ekuongorora nyaya diki dzekugadzirisa kana zvingangoita matambudziko makuru enjini nekuongorora mapulagi ako. Tarisa uone mifananidzo iripazasi, nerubatsiro rweSpark Plugs, uye gadzirira kuverenga zvishoma mwenje nguva inotevera paunodhonza mapulagi ako.
Chitarisiko: Yakapfava tan / grey kana brownish ruvara, pamwe neiyo shoma shoma electrode kukurwa kwevhu, inoratidza yakanakisa mashandiro ezvinhu, kusanganisira injini ine hutano uye chaiyo spark plug kupisa renji.
Chitarisiko & Zviratidzo: Iyo ma electrode-epakati nepasi-akafukidzwa mune yakasviba yekupfeka. Nekuda kwekuvhara uku kwema electrode, injini yako inogona kusangana nemoto wakashata. Iyi yekuvaka-yemoto madhiri anokwanisa pakupedzisira (asi kwete kazhinji) kuzadza iyo nzvimbo pakati pemaviri ma electrode.
Zvimwe Zvinokonzeresa: Oiri inodonha, isina kunaka huni hunhu.
Mvura uye Kuoma Kushatisa
Chitarisiko & Zviratidzo: Dry kusvibisa (kumusoro) kunoonekwa sesoty, dema kuvaka-up. Kushatisa mvura (pasi) kune kunyorova, dzimwe nguva kuoneka kwemafuta. Mamiriro ezvinhu ese ari maviri anogona kuumba kusarongeka kutanga uye kukanganisa.
Zvimwe Zvinokonzeresa: Zvichienderana nekuti spark plug yakaputirwa nemafuta kana mafuta, kunyorova kwakanyorovera kunogona kunge kuri chiratidzo cheakakanganiswa musoro gasket, kudzora kwakashata kubva kumhete yako yepistoni 'yekudzora oiri, matambudziko evavalvetrain, kana mamiriro akapfuma zvakanyanya. Dry fouling, kana kabhoni fouling, inowanzo kukonzerwa neyakawandisa mamiriro, uye dambudziko rinogona kunge riine yako yekushambidza mweya (yakavharika) kana carburetor. Zvimwe zvinokonzeresa zvinogona kuve kudzvanya kwakadzika, kubhururuka kwemhepo, kudzoreredza nguva, kana kukonzeresa kupisa plug.
Chitarisiko & Zviratidzo: Kutungamira kusvibisa kunogona kungoitika mune zvinoshandiswa zvinoshandisa peturu inotungamirwa, senge injini dzekumhanya. Kutungamira kusvibisa kunowanzo ratidza kunge yero brown brown dhipoziti pane iyo spark plug's insulator mhino. Kutungamira kusvibisa kunogona kukonzera kuti injini yako isakanganisa chete pahii-rpm uye pasi pekumhanyisa kwakaomarara.
Zvimwe Zvinokonzera zvisinei, nekuti mapulagi plugs anoshandurwa kazhinji mumitambo yekumhanya, lead fouling yazova isinganyanyozivikanwa.